Web mpanorina miantso ny Internet volavolan-dalàna ny zo - News Fitsipika
Web mpanorina miantso ny Internet volavolan-dalàna ny zo
Ny volavolan-dalàna ny zo tokony ho noforonina ho mpanapaka ny aterineto ao amin'ny taorian'ny fanambarana mikasika ny halalin'ny ny governemanta fanaraha-maso, ny injeniera ny World Wide Web niteny tamin'ny Alarobia.
Tim Berners-Lee nanao ny tolo-kevitra izay tafiditra ao amin'ny “Web We Want” fampielezan-kevitra ho misokatra Aterineto, marina 25 taona taorian'ny voalohany nanolotra ny taratasy tamin'ny drafitra ho an'ny ny World Wide Web.
“Mila ny eran-lalam-panorenana — ny volavolan-dalàna ny zo,” dia nilaza tamin'ny Guardian.
“Raha tsy isika misokatra, tsy miandany Internet dia afaka miantehitra amin'ny tsy manahy momba izay mitranga amin'ny varavarana indray, dia tsy afaka ny hanana governemanta misokatra, tsara ny demokrasia, tsara ny fahasalamana, mifandray amin'ny fiaraha-monina sy ny isan-karazany ny kolontsaina,” hoy izy:.
“Tsy vendrana ny mieritreritra fa afaka manana, nefa bado ny mieritreritra fotsiny dia afaka hipetraka miverina haka azy.”
Ny fampielezan-kevitra amin'ny aterineto miantso-mpiserasera manerana izao tontolo izao ny volavolan iray “Mpiserasera Bill ny Zon'ny ho an'ny firenena, noho ny faritra, na ho an'ny rehetra”.
Berners-Lee dia foana fampielezan-kevitra ho an'ny fanaraha-maso vitsy kokoa amin'ny aterineto, ary nidera Etazonia teo aloha fitsikilovana mpiantoka Edward Snowden rehefa nanambara antsipirihany ny fomba ny governemanta Amerikana manangona tahirin-kevitra an-tserasera marobe.
Berners-Lee dia nampitandrina fa ny zon'ny olona dia “satria hifanohitra bebe kokoa manodidina” ary izany ireo mpampiasa aterineto no lasa afa-po momba ny fahaverezan'ny fahalalahana.
“Noho izany dia te-hampiasa ny faha-25 taona ho antsika rehetra mba hanao izany, mba handray ny aterineto hiverina any amin 'ny tanana sy hamaritra ny tranonkala tiantsika ho amin'ny manaraka 25 taona,” hoy izy:.
Berners-Lee nitoe-jaza efa ho ny Web 25 taona maro lasa izay tao vao nanam-potoana tao Genève-monina rina, Eoropa ambony sombiny fizika laboratoara.
21903	0 rina, Edward Snowden, Geneva, mpiambina, National Security Agency, Tim Berners-Lee, Etazonia, World Wide Web
← Sevastopol, sehatr'ity Rosiana voninahitra, May ny 'handeha an-trano’ 20 Mahomby Home fikarohana onitra Fa nivonto Feet →